Kutambudzwa Kwemvura - An Analytics Analogy Inoenda Bhiriji Zvakanyanya | Martech Zone
Chitatu, Nyamavhuvhu 12, 2015 Jim Stern
Dhata, semvura, inouya nenzira dzakasiyana. Pfungwa dzevanhu dzakashanduka kusefa kunze kwakawanda kwedatha anouya nenzira yedu nekuti pane zvakawanda zvacho.
Paunovhura maziso ako nenzeve, data iri kwese kwese. Ruvara rwemadziro, ruzha rwemhepo inonhuhwirira uye hwema hwekofi yemuvakidzani wako zvinotorwa senge hunyoro. Mvura iri mumhepo nguva dzese asi hazvibatsiri kuiteerera zvakanyanya.
Kana mvura ikapindirana kuita bvungapfunga, inokumanikidza kuti uione uye inoita kuti nzwisise nyika yakakukomberedza zvinyanye kuoma. Asina kukwana maseteti, akaora dhata, yakaipa sainzi, mhedziso manyepo uye kufungidzira kusarura zvese zvinoita kuti iwe urasike nzira yako mumhute.
Dhata rinodonha semvura. Kana paine zvishoma, hazvigutsi zvisingaite- zvakaringana kuita kuti mota yako ive yakasviba uye kuvhiringidza hurukuro. Unozviwana uchipukuta pukuta pamagirazi ako sezvo mumwe munhu achiburitsa imwe nongedzo yedata, akaunganidzwa kubva kune imwe nzvimbo isingazivikanwe.
Stale mvura mudziva risina kudzika kune ngozi. Dhata, inounganidzwa kubva kune isingavimbike kupihwa, isina kucheneswa kana yakajairwa uye kusiiwa kuti ikure yakamira, inogona nyore kutungamira kune zvisirizvo mhedziso.
A akadzikama zvinoyerera yemvura inogona kungokwana kuzadza kantini kana kuchengetedza masango ecosystem. Angori matatu data poindi (huwandu hwemaemail akatumirwa, maringe nekuvhurwa, maringe nekudzvanywa) anogona kuchengetedza chirongwa chekushambadzira.
A kuyerera kune hutano ye data muchimiro cherukova rudiki inogona kushandiswa pakushambidza. Kuenderera mberi kwedata kuyerera kunoenzanisa mabhenji uye enhoroondo kufananidza. Kumhara peji rekugadzirisa kunogona kuitwa pamwe nekudzikama data yekutendeuka.
A rwizi rwakadzikama Inogona simba chigayo kuona huni kana kukuya gorosi. Injini yekukurudzira inongoda chete mupiro unovimbika kubva kune mashoma emitero kupa kuwedzera mukukosha kwemitoro yekutenga.
A waterfall yeinogona kufambisa hombe yemvura uye kuwanda kwakaringana kweruzivo kunogona kutyaira nguva chaiyo, zvine simba zvemukati system.
A rwizi iyo yakafara uye yakadzika zvakakwana inogona kutsigira indasitiri yese yekufambisa. Dhata rakaringana rinogona kuyangarara mabheji uye ngarava dzinotakura zvinhu muchimiro chekuunganidzwa kwemakuki kubva kushambadziro network, kuvimbika kadhi chirongwa dhata aggregators, uye data broker.
Kana dhata ikasvika muhuwandu hwakatarisirwa panguva dzinotarisirwa, inogona kutorwa, kuendeswa uye kushandiswa. Madiridziro masisitimu, madhamu nemadhamu zvinopa manzwiro ekudzora uye zvinobvumidza kuvakwa kwenzvimbo inogara ichiwedzeredza ine migero, makiyi nemadhamu. Dura remadhata rakavakirwa pane zvishoma zvinovimbika kuyerera.
Rucheno ruri padhuze nehuMwari
Mvura yakachena yakakosha mukubudirira kwehupenyu, kudiridza, kumhanyisa magetsi, nezvimwewo tsananguro ye 'yakachena' inogona kuchinja nechinangwa; zvakanaka kana paine algae mumvura inotonhodza gwenya remagetsi uye hazvigamuchirwe kana paine zvinopfuura zvikamu gumi pagirioni rearsenic mumvura yekunwa.
Data yakafanana. Mukunyorera tsamba kwakananga, kunyangwe iwe uine zita remunhu (Mr., Mai, Mai) harina kukosha… kunze kwekunge iwe uri kutumira kuna vanachiremba. Asi yakasviba data inokukanganisa nguva dzese.
SaUS Chief Data Sainzi, DJ Patil, chiise paFirst Round CTO Summit, "Kana usiri kufunga nezvekuti ungachengeta sei data rako rakachena kubva pakutanga chaipo, uri f ^ ¢ & ed. Ini ndinozvivimbisa. Kuedza kuichenesa mushure mekudaro kuchatora mwedzi kanenge. ”
Kana iwe ukapisa mvura kunzvimbo inovira, inogona kusimbisa iyo Yese Industrial Revolution. Dhata inoita kunge iri kuita zvakafanana chinhu. Kubva panguva iyo makomputa aigona kuchengeta pamwe nekuverenga, data rakaunganidzwa nekukasira semidziyo yekuchengetedza inogona kugadzirwa kuti iite kudaro.
Iyo Dziva Lake
Sezvo data kubva kune inoyerera ichipfuura nemumainjini enjini, zvese zvinopera mugungwa, kuseri kwedhamhu. Sezvo data rinoburitswa mufashoni inodzorwa, iro rinopa simba ma turbines eiyo data indasitiri; idzo injini huru dzekugadzira data nemazita seGoogle neFacebook. Pachave pasina kusanaya kwemvura pano.
Uye, pakupedzisira, pane dziva rakadzika remvura, rakamirira muongorori kuti apinde mukati. Scuba giya nepfumo pfuti muruoko, muongorori anoongorora yakadzika, mamepu nyowani pasi uye anowana mhando nyowani. Inguva inonakidza kwazvo kuve muongorori wedata.
Ndosaka vazhinji vavo vanga vachiratidzira iyo eMetrics Summit kubvira 2002. Mukana unotevera uri muBoston, Gunyana 27 kusvika Gumiguru 1, 2015.
eMetrics Summit Kunyoresa
Uye zvakadii pasimba re data rekuveza Grand Canyon inotevera? Ko zvakadii nekunyungudika kwechando kwedata rakarongeka? Isu tinorapa sei marara emvura munyika ichiwedzera uye ichiwedzera zvakavanzika?
Iyoyo mibvunzo yeimwe nguva uye mvura pasi pebhiriji.
Tags: AnalyticsDatautsanana hwe datadata scienceemetricsemetrics summit
Jim Stern mubatsiri wepasi rese anotarisa kuyera kukosha kwekugadzira nekusimbisa hukama hwevatengi. Sterne akanyora mabhuku masere pamusoro pekushambadzira kwekudyidzana, ndiye Mutungamiriri wekutanga uye iyezvino Sachigaro we Dhijitari Analytics Sangano uye inogadzira iyo eMetrics Summit uye Media Analytics Summit.
Iyo Bhatani Rekutenga Rinobatsira Zvemagariro Media Attribution uye ROI?
Hwemhando vs Huwandu Zvemukati: Iyo ROI paKunyora Zvishoma